Apple Watch usoro 4: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite gọọmentị | Akụkọ akụrụngwa
Bọchị abịawo, E meelarịrị Isi Okwu Apple, yabụ anyị maara akụkọ niile na ụlọ ọrụ Cupertino hapụrụ anyị. N'ime ngwaahịa ndị enyere na mmemme ahụ anyị hụrụ Apple Watch Series 4. Ọgbọ ọhụụ nke smartwatch ụlọ ọrụ ahụ, nke, dị ka ekwuru na izu ndị na-adịbeghị anya, na-abịa mgbanwe dị iche iche.
Ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ ma e jiri ya tụnyere ọgbọ gara aga. Ya mere, n'okpuru anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara ihe ọhụrụ ndị a Usoro Apple Watch 4. Akụkụ ndị gbanwere na nche ọhụrụ ndị a, yana kwa mgbe anyị nwere ike ịtụ anya ka ha rute n'ụlọ ahịa na ego ole ọ ga-akwụ.
Ọgbọ ọhụụ nke nche ụlọ ọrụ ahụ rutere akara site na mgbanwe mgbanwe. Ọ bụ isi ihe ọhụụ, nke a nụrịrịrịrịrịrị ọnwa ndị a. Anyị na-eche ihu nnukwu mmelite ma ọ bụ mgbanwe Apple webatara na elele ya anya. N'ihi ya, obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ọgbọ nwere nnukwu mkpa.
1 Nhazi ohuru
2 Ọrụ ọhụrụ
Apple Watch Series 4 na-enye ọhụụ ọhụrụ, nke oge a, nke dị ugbu a ma dịkwa oke mma. Na mgbakwunye, ọ na-ekwe nkwa ịdị nkasi obi dị mma iji eyi nkwojiaka, nke bụ akụkụ dị mkpa nke elekere ọ bụla n'ahịa taa. Ihuenyo bụ akụkụ nke anyị na-ahụ mgbanwe kachasị, dịka ekwuputala.
Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ ewebatala nnukwu ihuenyo na ụdị a. Anyị na-eche ihu na ihuenyo nke buru ibu karịa nke ọtụtụ smart nche na ahịa. Yabụ ọ ga-adị nkasi obi karịa iji ya, na-enye ahụmịhe onye ọrụ ka mma. Ọ na-abịa nha abụọ, 40 na 44 mm na dayameta, okpon akan emana emi ekebede.
Usoro Apple Watch 4 nzọ na ihuenyo OLED, nke pụtara maka akụkụ ya dị oke mkpa ma gbaa ya gburugburu. N'ihi nke a, ọdịdị elekere na-agbanwekarị, na-enweta ụdị ọhụụ a. Na mgbakwunye na iji ezigbo mma karịa ihuenyo.
Iji nweta uru nke mgbanwe a na elekere, Apple na-ewebata ọhụụ ọhụrụ na ya. Agbanwewo ya iji mee ka ọtụtụ ihe ngosi ngwaọrụ. Anyị nwere ike ịhụ na na menu, a na-egosi ngwa ndị ahụ n'ụzọ mechie. Ihe nlere nke oma, odi mfe iji na ihe kariri ugbua.
Ihe ohuru ohuru na-esonyekwa na oru ohuru. E nwere ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ na usoro nke Apple Watch Series 4 a. Lọ ọrụ ahụ achọwo ichepụta na elekere a, ha hapụkwara anyị ọrụ ndị na-enweghị ụdị ọ bụla ọzọ nwere taa. Ya mere, ha na-erite uru ọzọ na nke a.
Nke mbụ bụ ihe kasị dị ịrịba ama n'ime ha, nke bụ ikike ịchọpụta ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ enwe ọdịda mgbe ụfọdụ. Ihe kachasị adọrọ mmasị banyere ọrụ ahụ bụ na ọ ga-enwe ike ịchọpụta ma ọ bụrụ ọdịda, mkpọtụ ma ọ bụ amị amị. Yabụ na dabere na ihe mere, ị nwere ike ịkpọtụrụ onye akara dị ka kọntaktị mberede. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ịchọta ihe na-enweghị isi, elekere ga-agwa anyị ka anyị gaa dọkịta.
Ọ bụ ezie na ọrụ kpakpando nke Apple Watch Series 4 ga-abụ electrocardiogram. The ọrụ bụ na-ike na onye ọrụ ekwentị. N'ihi nke a, elekere bụ ngwaọrụ izizi n'ahịa nke a na-ebukarị ndị ahịa iji tụọ akụkụ a. Ihe nlele ga-adị mfe ma nwee ike rụọ ya n'oge ọ bụla, ọ ga-ekwe omume ịme ya site na ngwa elekere.
Maka nke a, Apple ewebatala igwe eletrik ọhụrụ na elekere. Ọ bụ ha na-ahụ maka ịtụ obi nke onye ọrụ. Ọrụ a na-ekwe nkwa oke nkenke na ọrụ ya, yana ịba uru maka ịchọpụta arrhythmias. Ahụike wee nwetakwa ọfụma na nche ụlọ ọrụ Cupertino.
Emeziwo igwe okwu na igwe okwu. Na usoro nke nnwere onwe enweghi mgbanwe. Dị ka ọgbọ gara aga, na-enye anyị nnwere onwe nke awa 18. Ebe mgbanwe dị na njikọta Bluetooth, nke na nke a bụrụ 5.0.
Ihe omuma ohuru, obu ezie na obughi na ngwanrọ ngwanrọ, bu na Apple Watch Series 4 nwere ihe nhazi ohuru. Ọ bụ ihe nhazi 64-bit. Ekele ya, nche ahụ ga-arụ ọrụ n'ụzọ dị ukwuu karị na ike. Apple na-azọrọ na ọ dị okpukpu abụọ karịa ngwa ngwa gara aga na nhazi ya. Ọ bịara n'okpuru aha S4.
Dị ka ọgbọ ndị gara aga, a ga-enwe ọtụtụ nsụgharị nke elekere dị. Anyị nwere nsụgharị abụọ n'ihe gbasara nha, dịka anyị kwuru na mbido. Ma e nwekwara nsụgharị ndị ọzọ, na-adabere n'ọtụtụ akụkụ akọwapụtara.
Anyị na-ahụ Apple Watch Series 4 na LTE na onye ọzọ na-enweghị LTE. Na mgbakwunye, enwere ụdị dị iche iche emere nke aluminom, nke ga-adị na agba ọla edo, ọla edo, isi awọ na ọla ọcha. Ọ bụ ezie na a ga-enwekwa ọzọ na igwe anaghị agba nchara, dị na oji na ọla ọcha. N'ikpeazụ, a na-atụ anya na a ga-enwe ụdị Nike + ọzọ, nke e mere maka egwuregwu na ndị ọzọ na Hamis, ihe ọzọ maka obodo ahụ na obere egwuregwu.
Banyere ya igba egbe, A na-atụ anya Apple Watch Series 4 ịmalite na September 21. Mana, na Fraịde a, Septemba 14, oge ndoputa ga-emeghe maka ndị ọrụ niile nwere mmasị na nche ụlọ ọrụ America. N'ihe banyere Spain, a pụrụ ịzụta mbipute ya na LTE na onye na-enweghị LTE.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ụdị ahụ na LTE, ọ ga-ekwe omume ịnweta ya na ndị ọrụ dịka Orange na Vodafone, naanị ndị ekwenyela ugbu a. Ya mbụ price bụ $ 499, nke a na-atụ anya na Spain ga-abụ euro 429. Ezie na ụdị nke na - enweghị LTE ga - adị ọnụ ala karịa. Na United States, ego ya ga-abụ dollar 399, nke ihe dị ka euro 342.
O doro anya na ọgbọ ọhụrụ nke Apple ese abịa stomping. Firmlọ ọrụ ahụ kwere nkwa na anyị ga-anụ ozi ọma, anyị na-ahụ na ha ewetafela na nke a. Ugbu a, anyị ga-echere wee hụ otu ndị ahịa si enweta Apple Watch Series 4. Kedu ihe ị na-eche banyere elekere?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Apple Watch Series 4 bụ ndị gọọmentị: Mara akụkọ ha niile